Yist | Ọkọwa Okwu Ahụike
Yogurt Ma yist Infection - Iri Yogurt iji wepu oria yist.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime anyị ga-eche na yist nwere ike ịbụ onye iro, ọkachasị ndị nke anyị butere ọrịa na yist, ọ bụghị eziokwu. Yist dị na ụwa gbara anyị gburugburu na-eche na ọ fọrọ nke nta ka mmadụ niile nwee yist nọ na ahụ, opekata mpe ruo obere.
Yist (ụdị ero na-akpata microscopic) nwere ike itolite n’akpụkpọ ahụ na usoro nri yana n’akwara akụkụ ọmụmụ. Yist na-a onụ shuga dị na sel nke nwere ahụ ike, ọ na-etokwa n'ebe ana-ekpo ọkụ na mmiri. Yist - Ọgwụ na ọgwụgwọ ọgwụgwọ na-ewu ewu karị.